अब यसरी सजिलै तिर्न सकिन्छ बिजुलीको बिल
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महशुल तिर्न लामो लाइनमा बस्नु भएको छ ? वा न्यूनतम महशुल तिर्नसमेत बढीभन्दा बढी खर्च गर्नुपरेको छ ? चिन्ता नलिनुस्, अब तपाईंले त्यस्तो झन्झट व्यहोर्नु पर्ने छैन । नेपाल विद्युत् ...विस्तृतमा पढ्नुस्
4 Bhadra 2074 Sunday प्रतिकृया दिनुहोस
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सोमबारदेखि सवारी साधनमा विद्युतीय (इम्बोस्ड) नम्बर प्लेट राख्न शुरु गर्दैछ । सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखेपछि सवारी चोरी हुने समस्या र अपराधका काममा प्रयोग हुने घटना रोकिने विभागका प्रवक्ता डा ...विस्तृतमा पढ्नुस्
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा दैनिक उपभोग्य सामानहरुको मुल्यमा अस्वभाविक बृद्धि
सिन्धुली । चाडपर्वहरु तिज दशै तिहार नजिकिई रहदा सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुलीमाडी लगायत जिल्लाका दुधौंली, खुर्कोट, कपिलाकोट, झागाझोली रातमाटा, नेपालथोक लगायतका प्रमुख बजारहरुमा दैनिक रुपमा उपभोग सामानहरुमा एक्कासी बृद्धि गरिएको छ । सरकारी निकायले नियमित ...विस्तृतमा पढ्नुस्
3 Bhadra 2074 Saturday प्रतिकृया दिनुहोस
सिराहामा मात्रै बालीनालीमा १ अर्व २४ करोडको क्षति !
सिरहा । बाढी र डुवानका कारण सिराहा जिल्लामा १ अर्व २४ करोड वरावरको बालीनालीमा क्षति पुगेको बताइएको छ । सवैभन्दा बढी क्षति माछा पालन र तरकारी खेतिमा भएको छ । बाढीले ५ सय २० हेक्टरको ...विस्तृतमा पढ्नुस्
2 Bhadra 2074 Friday प्रतिकृया दिनुहोस
काठमाडौं । यो साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १ सय ७८ कम्पनीहरुको कारोबार भएको छ । २७ हजार ४ सय ६६ कारोबारबाट तीन अर्ब पाँच करोड ६७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरका ८४ लाख ४६ हजार ...विस्तृतमा पढ्नुस्
कपिलवस्तु । लुम्बिनीमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानलस्थल निर्माणमा भैरहेको ढिलाईमा व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको छ । लेखा समितिले निर्माणस्थलको स्थलगत अनुगमन गरेर ढिलासुस्तीका बारेमा जानकारी समेत लिएको छ । समितिका सभापति डोरप्रसाद ...विस्तृतमा पढ्नुस्